Maxaa keenay in Garoonka Muqdisho lagu xayiro wafdigii Sheekh Shariif & Xasan Sheekh ee kusii jeeday Beledweyne? | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa saaka soo boxy in garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho lagu xayiray wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Shariif Sheekh Axmed uuna ka mid ahaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo xildhibaanno ka tirsan labada Gole.
Wafdigan oo hore uga baaqday safar kale oo ay qorsheysteen inay ku tagaan magaalada Beledweyne ayaa la sheegay inay diyaaradii qaadi lahayd loo sheegay in Garoonka magaalada Beledweyne uu roob ka da’ay xalay isla markaana xaaladiisa la qiyaasayo in diyaarad caadi ah ay ka degi karto.
Maareeyaha Hay’adda Duulimaadyada rayidka Axmed Macalin Xasan ayaa sheegay inaysan jirin wax xayiraad ah oo la saaray diyaaradaha aadaya magaalada Beledweyne, balse roob xalay da’ay dartiis ay qiyaas dhan 600 mitir oo garoonka ka mida ay qoyday, iyadoo loo diray helikobtar si loo hubiyo in diyaaradaha caadiga ka degi karaan Garoonka.
Maareeyaha ayaa sheegay in AMISOM ay maamusho hagista diyaaradaha tegaya garoonka magaalada Beledweyne, isla mariana kaliya la hubinayo in garoonka laga degi karo iyo amnigiisa, wuxuuna meesha ka saaray in wafdi ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore lagu xayiray Garoonka, isagoo caddeeyay in wafdigaasi ay diyaarad kireysteen, iyaguna ay warbixinta garoonka siiyaan duuliyeyaasha diyaaradaha.
Maareeyaha Hay’adda Duulimaadyada rayidka ayaa sheegay inuusan la soon wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisal wasaaraha Xasan Cali Kheyre oo ku sii jeeda magaalada Beledweyne sida ay sheegeen warbaahinta qaarkood.
Dhinaca kale Xildhibaan C/risaaq Jindi oo ka mida wafdiga Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa isna sheegay inaysan jirin cid ay la xiriireen oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, isla markaana ay garoonka tageen 7:30 subaxnimo, balse diyaaradooda loo sheegay inaysan duuli karin.
Warar lagu baahiyey baraha bulshada ayaa sheegay in wafdiga madaxweynayaashii hore loo xayiray iyadoo uu magaalada Beledweyne u dhoofi lahaa Ra’iisal wasaare Kheyre.
Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh
Previous articleWafdigii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo u dhoofay Beledweyne, kadib muddo lagu xayiray Garoonka Muqdisho
Next articleMahad Salaad: “Amarka lagu celiyey Diyaaradii qaadi lahayd Madaxweynayaashii hore waxaa bixisay NISA”